रकम अभावमा रोकियो ‘स्मार्ट बृद्धाश्रम’ – NamoBuddha Khabar
रकम अभावमा रोकियो ‘स्मार्ट बृद्धाश्रम’
सोमबार, माघ २८, २०७५ | ९:२०:३१ |
कपिलवस्तु– १८ कोठाको स्मार्ट बृद्धाश्रम । योगा, पौष्टिक आहार अनि भजन किर्तन । यस्तो बृद्धाश्रममा सहज जिवन विताउन पाउँदा कोही नभएका असहाय बृद्धबृद्धाको मनले कस्तो आर्शिवाद देलान् ? जीवनका अन्तिम दिनहरु शान्त जंगलछेउ यसरी बिताउन पाउँदा उनीहरुले सुखको कस्तो सपना देख्लान् ? कपिलबस्तुस्थित वाणगंगा–२ नन्दनगरमा केही समयपछि यो सपना पुरा हुनेछ । यतिबेला भने पर्याप्त रकम नहँुदा बन्दाबन्दैको यो बृद्धाश्रमको निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
बृद्धबृद्धालाई स्याहार सुसार गर्दै सहज जिविकोपार्जनकालागि बृद्धाश्रम बनाउन लागेको हो । पुर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि करिब ४ किमी उत्तर कैलास आश्रमको मनकामना धार्मिक वनले प्रदान गरेको एक विघा जग्गामा बृद्धाश्रम निर्माण भईरहेको छ । बेलायतमा क्रियासिल बुद्ध फाउण्डेसन, कपिलवस्तु समाज र एनआरएनले बेलायतमा च्यारिटी गरेर रकम संकलन गरेका थिए । उक्त रकमबाटै यहाँ बुद्ध फाउण्डेसन नेपालले एकबर्ष अघि बृद्धाश्रम निर्माण शुरु गरेको थियो ।
वन क्षेत्रसंगै सटेर रहेको बृद्धाश्रममा शान्त वातावरणमा सहज जिविकोपार्जनको सुविधा दिने लक्ष्य रहेको छ । उनीहरुलाई भजन किर्तन र मनोरञ्जन सहित आवास खानाको सुविधा दिने योजना रहेको छ । त्यस्तै उनीहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि बृद्धाश्रममै दिईने व्यवस्था गरिएकोछ ।
शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जनाए अनुसार बेलायतबाट अहिले सम्म ५३ लाख संकलन गरेर यहाँ पठाईएको छ । करिब १ करोड २५ लाखको लागतमा बन्न लागेको बृद्धाश्रमलाई झण्डै ७० लाख रुपैंया रकम नपुग छ । निर्माण कार्यमा बेलायतबाट संयोजन गरेका युवा व्यवसायी एवं बुद्ध फाउण्डेसन युकेका अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठका अनुसार अहिले बृद्धाश्रमको काम रोकिएको छ । ‘बेलायतबाट सहयोगीहातहरु अघि बढेपछि बृद्धाश्रमको काम अघि बढेको थियो’ उनले भने, ‘अब स्थानीय स्तरबाटै पनि सहयोगी हातहरु अघि बढोस भन्ने चाहन्छौं ।’
यस्तो हुनेछ बृद्धाश्रम
बृद्धाश्रम १८ कोठाको छ । अहिले पिलर उभ्याएर छत सम्म पर्खाल लगाईएको छ । छत ढलान, फनिसिंग र विजुलीको काम चाहिँ बाँकी छ । बृद्धाश्रमकालागि चाहिने काठ सामदायिक वनबाट निःशुल्क प्राप्त भएको छ । निर्माण कामको ढुंगा, बालुवा र गिट्टी पनि रोयल्टी छुट भई प्राप्त भएको छ । पत्रकार संमेलनमा बुद्ध फाउण्डेसन नेपाल कोषाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले अहिले सम्म भएको आय व्यय पनि प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अब ७० लाख बढी रकम नपुग भएको बताए ।
बृद्धाश्रममा असहाय कोही नभएका बृद्धबृद्धालाई प्राथमिकता दिई राखिने बुद्ध फाउण्डेसन नेपाल अध्यक्ष रविराज ज्ञवालीले बताए । त्यसपछि अभिभावक भएपनि समस्यामा परेकालाई प्राथमिकता दिने उनले बताए ।
वन क्षेत्रसंगै सटेर रहेको बृद्धाश्रममा शान्त वातावरणमा सहज जिविकोपार्जनको सुविधा दिने लक्ष्य रहेको छ । उनीहरुलाई भजन किर्तन र मनोरञ्जन सहित आवास खानाको सुविधा दिने योजना रहेको छ । त्यस्तै उनीहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि बृद्धाश्रममै दिईने व्यवस्था गरिएकोछ । वर्ष दिन अघि शिलान्यास गरिएको बृद्धाश्रमको ५० प्रतिशत बढी काम सकिएकोछ । रकम संकलन भए एक वर्ष भित्रै संपन्न गर्ने योजना छ ।